6 ukudla okungavunyelwe ukuncelisa - Ukufaneleka kanye nempilo 2022
6 ukudla okungavunyelwe ukuncelisa
Amasoseji nenyama ebhenyiwe
Ukudla akukona okuqinile kakhulu, akukho okumele ukhathazeke ngakho.
Ukuncelisa ibele kuyinqubo ebalulekile empilweni kamama nengane, lapho umntwana enza amasosha omzimba wakhe. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi yiluphi uhlobo lokudla umama anamathela kulo. Futhi ukudla kufanele kube okuhlukahlukene, okucebile amaprotheni, imifino, ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, izithelo namafutha anempilo.
Nokho, kunohlu lokudla okungavunyelwe ukuncelisa.
Abantu kuphela abadla ubisi lapho sebekhulile, kwabaningi alugayeki ngendlela efanele, nakuba singakuboni nokukubona. Imikhiqizo yobisi ingabangela ukungagayeki enganeni yakho.
Kodwa imikhiqizo yobisi izozuzisa umama kuphela.
Ama-condiments, ikakhulukazi ashisayo njengopelepele, angabangela i-colic enganeni encela ibele. Kungcono ukuwayeka sonke isikhathi sokuncelisa.
Akuwona umkhiqizo owusizo kakhulu, futhi ocebile ngama-carcinogens. Enganeni, ukusebenzisa kukamama amasoseji nenyama ebhenywayo kungabangela ukungagayeki kahle kokudla.
Kubonakala sengathi lokhu kuyaqondakala, kodwa abaningi bakholelwa ukuthi ingilazi yewayini elimhlophe elomile ngeke ilimaze umama nengane yakhe. Ngempela, ukugcwala kotshwala obisini kuzoba phansi kakhulu, kodwa kungcono ukungadli okungenani izinyanga eziyisithupha.
Okunye kokudla okungenamsebenzi kakhulu, akuqukethe lutho ngaphandle koshukela ongenalutho - i-carbohydrate elula nombala. Ama-carbohydrate alula aphazamisa ukuzuza kwesisindo esinempilo nokumuncwa kwamaprotheni.
Abavinjelwanga wonke umuntu, kodwa kuphela komama abane-allergies yofuzo emndenini. Kungase kuvele ukuthi ingane ibuye ibe yi-allergic futhi ukudla okubomvu kuzovusa ukuqubuka noma omunye umphumela wokungezwani komzimba.
Yikuphi ukudla okungcono kakhulu kwesifo sezinso: izincomo ezivela kuchwepheshe wezokudla
Isifo sezinso siholela ezinkingeni ze-metabolic. Ukudla ukudla okunempilo nokunomsoco kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokusiza ukuphatha isimo sakho nokuvimbela ukuqhubeka kwaso
Izizathu ezi-5 zokuthi kungani kufanele uyeke ukudla iphalishi ngesikhathi sasekuseni
Iyiphi iphalishi elizuzisa kakhulu impilo nokugaya: izinzuzo kanye nokulimala kwe-oatmeal ngesidlo sasekuseni noma kungani kungafanele sidle ama-carbohydrate
Ukudla ngeqembu legazi: izimiso eziyisisekelo nezici zemenyu
Ukudla kohlobo lwegazi kuya ngokuya kuduma. Sizokutshela ukuthi ukugcina imithetho yokudla okunomsoco eqenjini lakho kuzosiza hhayi nje ukuthuthukisa izinga lempilo, kodwa futhi ubuyisele isisindo sakho esimweni esivamile